दक्षिण कोरियाले गुमाएको योग्य नेपाली श्रमिक « Tuwachung.com
तुवाचुङ संवाददाता	२०७७ पुष १२, २३:२९
गाउँका बिहे, भोजभतेर वा हरेक सामाजिक काममा उनी अग्रस्थानमा रहेर सरिक हुन्थे । गाउँमा रहेको सांस्कृतिक कार्यक्रममा उमेरले आफूभन्दा पाकाको नेतृत्व गर्दै अघि बढे । फलतः गाउँका अधिकांशले उनलाई सम्मान गर्थे । स्थानीयस्तरमा हुने कविता, हाजिरीजवाफलगायत अन्य विविध खेलकुद प्रतियोगितामा उनी नेतृत्व गर्न पुग्थे । भन्छन्, ‘यही पृष्ठभूमिका कारण पत्रकारिता अध्ययनका लागि मलाई उचित ठानियो । किनकि मेरो आफ्नै चाहना भने पत्रकार बन्ने थिएन ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ०६८ मा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेका उनको काठमाडौं प्रवेश र पत्रकारिता यात्रा संयोगमात्रै थियो । ‘गाउँको एक गरिब परिवारमा हुर्किएको मजस्तो मानिस काठमाडौं बसेर पढ्ने साहस गर्दैनथे,’ राजधानीमा चिनिने पत्रकारमध्ये एक उनले भने, ‘म पनि काठमाडौं बसेर पढ्छु भनेर यता आएको होइन । काठमाडौं बसाइ र पत्रकारिता अध्ययन दुवै संयोगले नै भयो ।’
दिक्पाल दाइप्रति मेरो मनमा कम्ती सम्मान जागेन । त्यो कुरा म शब्दमा व्याख्या गर्न सक्दैनन् । खासमा उनलाई त्योभन्दा अगाडि एक अग्रजकहाँ लेखका लागि फोटो माग्न जाँदा सुरुमै पैसा मागेको झल्को थियो । ‘उनीबाट ८० रुपैयाँमा फोटो त किनेर ल्याएँ,’ उनले दुःखेसो व्यक्त गरे, ‘तर, उक्त फोटोका लागि लेखिएको लेख कहीं कतै प्रकाशित भएन । फोटो त्यत्तिकै खेर गयो । दिक्पाल दाइले फोटोको पैसा लिन नमान्दा साँच्चिकै उनीप्रति सम्मान जागेको थियो ।’ यस्तो उत्साहपछि उनलाई पत्रकारितामा प्रवेश गर्दा मामाले भनेजस्तै साँच्चै ‘यता लेख्दा पनि पैसा, उता लेख्दा पनि पैसा’ हुन्छजस्तो लागेको थियो । तर, समय र परिस्थिति त्यति सहज थिएन । र, अहिले पनि छैन । उक्त लेख प्रकाशितपछि उनले अन्य पत्रिकामा पनि लेख्ने कोसिस गरे । तर, कसैले पत्याएनन् । जागिर त कतै पाउने सम्भावना थिएन ।
यसबीचमा केही समय जनएकता साप्ताहिकमा काम गरे । त्यहाँ कहिलेकाहीं सम्पादकले खाजा खुवाउनेबाहेक एक पैसा पाएनन् । हुँदाहुँदै ०५८ मा समता भन्ने साप्ताहिक पत्रिकामा काम गर्न थाले । एक वर्षसम्म काम गर्दा त्यहाँ चियाबाहेक खाजासमेत आफैंले खान पथ्र्यो ।
‘फेरि म कस्तो अनुभवहीन र अव्यावहारिक भने आफूले चिने–जानेको भन्दा कसैसँग चिनजान बढाउन नखोज्ने/नसक्ने । जुन एउटा पत्रकारका लागि साह्रै नराम्रो गुण हो,’ उनले आफ्नो कमजोरी सुनाए, ‘उक्त पत्रिकाको प्रकाशक राधा बुढाथोकी थिइन् । जोसँग मैले एक वर्ष काम गर्दा मुस्किलले दुई/तीनपटकमात्र बोलें हुँला । नत्र म सिधै कार्यालय जाने सम्पादक प्रभुनारायण बस्नेतको माध्यमबाट काम गर्न गएको हुनाले उनीसँग कुरा गर्ने काम गर्ने फर्कन्थें । तलबको कुरा मैले कहिल्यै कसैसँग गरिनँ । यसकारणले होला सायद पत्रिकामा एक वर्ष काम गर्दा पनि एक पैसा पाइनँ ।’
साहित्यिक प्रवृत्तिका उनी आफूलाई प्रायः स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न मन पराउँथे । कुनै कार्यालयमा १०/५ को ड्युटी गर्नु उनका लागि साँच्चिकै सजायँजस्तो लाग्थ्यो । त्यसैले खान, बस्न राम्रै पुग्ने तलब भए पनि शिक्षणमा उनको दिल खुसी हुन सकेन । पत्रकारिताको भोक मार्न बीचमा इन्द्रकुमार राई, राजु एन राईलगायतसँग मिलेर एक साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका पनि चलाए । इन्द्र प्रधानसम्पादक र उनी कार्यकारी सम्पादक भएको उक्त पत्रिका तीन अंक निस्किएर बन्द भयो ।
‘ओहो, त्यो पत्रिका चलाउँदाको दुःख वर्णन गर्ने हो भने अर्कै उपन्यास बन्छ,’ चाम्लिङ सम्झन्छन्, ‘यद्यपि, हामीले हिम्मत गरेका थियौं ।’
त्यसबेलाको एउटा घटना उनले कहिल्यै नबिर्सनेगरी दिमागमा बसेको छ । उनीहरूबीच ख्यालठट्टा चल्दा काठमाडौंमा टिक्न अग्रजले गरेको संघर्षको कथा पनि काम लाग्दोरहेछ । यसै सिलसिलमा एक दिन उनले भनेछन्– हाम्रो गाउँका कवि जसराज किराती र देवराज ढकालले पहिले काठमाडौंमा भोकभोकै हिँड्थे रे । एक दिन त हिँड्दाहिँड्दै देवराज अचानक टक्क अडिएछन् । अनि जसराजले सोधेछन्– होइन एहोई किन रोकिएको ? देवराजले भनेछन्– होइन पख न जेठा, यहाँ कस्तो मीठो खाजाको बास्ना आइरहेको छ । एकछिन सुघौं । नखाए पनि खाएजस्तै हुन्छ । जसराज र देवराजको घटना उनीहरूको जीवनमा पनि लागू भयो । ‘पत्रिका चलाउनेक्रममै एक दिन सम्पादक भोजीराज चाम्लिङ र म बागबजार हुँदै पत्रिका डिजाइन गर्न डिल्लीबजार जाँदै थियौँ,’ उनले भने, ‘हामीलाई ज्यादै भोक लागेको थियो । खाजा खाने पैसा थिएन । यस्तैमा मैले जसराज र देवराजको कथा भन्दै थिएँ । स्वाट्ट मःमः को बास्ना आयो । हामीले त्यही अनुभव ग¥यौं, जो जसराज र देवराजले गरेका थिए ।’ त्यसबेला भोगीराजले भनेको कुरा उनको दिमागमा अझै ताजा छ । भोगीराजले भनेका रहेछन्, ‘पछि ठूलो मान्छे बनियो भने त यो साह्रै मीठो कथा बन्छ हगि ? केही गर्न सकिएन भने पनि छोरानातिलाई सुनाउनुपर्छ ।’ उनीहरूले त्यस्तो कठिन घडीमा पत्रिका चलाएका थिए ।
मिडिया आफैंमा ‘आवाजविहीनको आवाज’ मानिन्छ । यसले स्वतन्त्र भएर सरकार र नागरिकबीच ‘साँघु’ को काम पनि गर्छ, सरकारको गलत कामलाई निगरानी गर्दै ‘वाचडग’ को भूमिका निर्वाह पनि गर्छ/गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यही नै व्यावसायिक पत्रकारिता वा मिडियाकर्मीको मूल जिम्मेवारी हो । के नेपाली मिडियाले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ त ?
पत्रकारितामा लागेपछि पाएका तीता–मीठा प्रतिक्रिया, प्रलोभन र धम्कीका भाषा उनले पनि अनुभव गरेका छन् । उनले ०६३ मा लेखेको मिडिया ‘गेटकिपिङ’ शीर्षाकृत आलेख त्यसबेला त्यत्तिकै चर्चित बनेको थियो । यही लेखबाट प्रभावित भएर गोपाल किरातीले उनलाई विशेष ‘भेट’ पनि गरेका थिए । ‘त्यस्तो चर्चा गर्नलायकको घटना खासै छैन । अझ धेरै त भोग्नु बाँकी नै छ,’ दैनिक पत्रिकाको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘तर, नेपाली राजनीति, शक्तिकेन्द्र र सत्तासम्बन्धबारे थुप्रै रमाइला अनुभव सँगालेको छु । जुन कुनै बेला सविस्तार लेख्नेछु ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्राविधिक टोलीले संवत् २०७४ चैत १५ र १६ गते मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत